hypothyroidism များ၏ကုသမှုကိုဖြည့်ဖို့3ကုစား - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » သဘာဝကကုစား "3 ကုစား hypothyroidism များ၏ကုသမှုကိုဖြည့်ဖို့ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
hypothyroidism များအတွက်ကုသရှာဖွေနေပါသလား ကျနော်တို့မကြာခဏဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် hypothyroidism ၏ကုသမှုပြီးစီးရန်အချို့သောရိုးရှင်းသောနှင့်သဘာကုစားကိုရှာဖွေချင်တယ်။
ဤဆောင်းပါး၌, ငါတို့သည်သင်တို့သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်ရုံ options များဆက်ကပ်။ သင်သည်သင်၏သုခချမ်းသာမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါလိမ့်မည် နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ထိုကဲ့သို့သောပင်ပန်း, ဆံပင်ဆုံးရှုံးမှု, အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်ဝမ်းချုပ်အဖြစ်အချို့သောရောဂါလက္ခဏာကိုထိန်းချုပ်။
La သိုင်းရွိုက် ကနျြးမာရေးအတှကျအမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ အမှန်မှာကဇီဝြဖစ်ထိန်းညှိကြောင်းဟော်မုန်းထုတ်လုပ်သောဤဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအစကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏များစွာသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ hypothyroidism ၏ရောဂါလက္ခဏာအများအပြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေအဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါသိုင်းရွိုက်နည်းနည်းတက်ကြွအခါ Hypothyroidism တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်လုံလောက်အောင်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မထားဘူး။ ပြဿနာအဖြေရှာဖို့, ဆရာဝန်သွေးစမ်းသပ်မှုများလုပ်ဆောင်သင့်တယ် thyroxine (T4) စစ်ဆေး thyrotropin (TRH) ။
သို့သော်ရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစားသောဘွဲ့နှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တခါတရံအချို့သောထိခိုက်နစ်နာဒေသများတစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီးပုံမှန်ပြန်နိုင်တယ်။
ဒီအဘို့, ဆရာဝန်ကအမြဲတမ်းအပေါ်အခြေခံသည် သွေးစစ်ဆေးမှုနှင့်လူနာအားဖြင့်တင်ပြလက္ခဏာများပေါ်မှာ။ အဲဒါကိုသင့်လျော်သောစဉ်းစားလျှင်ထိုအရပ်မှ, သူက၎င်း၏လိုငွေပြမှုလျော်ကြေးပေးဖို့သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများဆေးဝါးသတ်မှတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုနှင့်မှန်သောချိန်ခွင်စာရွက်များကိုလိုက်နာအပြင်, ကျနော်တို့ဖြည့်စွတ်ရန်အချို့သောအထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာနိုင်တာ hypothyroidism ၏ဆက်ဆံမှု။ ကျနော်တို့သိုင်းရွိုက်ရောဂါဤဓာတ်ရှိပါက၎င်းသည်လည်းကြိုတင်ကာကွယ်အစီအမံအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်။
hypothyroidism များအတွက် complementary ကုသမှု
ဤတွင်အဘယ်သူ၏ထိရောက်မှုကိုသက်သေပြနေသည်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးကုသမှုဖြည့်စွတ်နိုင်ပါတယ် hypothyroidism ဆန့်ကျင်အချို့ကုစားဖြစ်ကြသည်။
1 ။ ဆယ်လီနီယမ်၏နေ့စဉ်ထိုး
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ဆယ်လီနီယမ်အထူးသဖြင့်သိုင်းရွိုက်အတွင်းစုဆောင်း။ ဤသည်ဂလင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် ဟော်မုန်းများ၏ဇီဝြဖစ်အဘို့နှင့်လည်းမြင့်မားသည်ဓါတ်တိုးအာဏာဆယ်လီနီယမ်။
အမြင်တစ်သိပ္ပံနည်းကျအချက်အနေဖြင့်တစ်ဦးလေ့လာမှုကဒီသတ္တုဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ, (autoimmune hypothyroidism ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်Hashimoto ရဲ့ရောဂါ) မှ:
တူညီသောလေ့လာမှုအော်ဂဲနစ်ဆယ်လီနီယမ်ကိုစားသုံးအကြံပြုထားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကျွန်တော်တစ်ဦးကျန်းမာရေးပရော်ဖက်ရှင်နယ်၏ကြီးကြပ်မှုမရှိဘဲဤဖြည့်စွက်မယူသင့်ပါတယ်။ အမှန်မှာထိုပိုလျှံနေတဲ့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဘရာဇီးအခွံမာသီး: ငါတို့သည်တစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာပူဇော်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ရုံ2ဆယ်လီနီယမ်ပမာဏကိုသေချာစေရန်တစ်နေ့လျှင်လောင် ငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုမဆိုစွန့်စားမှုမပါဘဲ, လိုအပ်ပါသည်။
2 ။ maca ၏ဖြည့်စွက်
Maca တစ်အစားအစာအဖြစ်စားသုံးကြောင်းပီရူးကနေအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကမ္ဘာ့၎င်း၏စွမ်းအင်ဂုဏ်သတ္တိများမှကျေးဇူးတင်စကားအမှုန့်ကိုလည်းတွေ့နိုင်သည် ဟော်မုန်းစည်းမျဉ်းအဖြစ်.
အဝါရောင် maca အထူးသဖြင့်သရုပ်ပြ သိုင်းရွိုက်ရောဂါအတွက်၎င်း၏ထိရောက်မှုနှင့် သွေးဆုံးနေစဉ်အတွင်း. ဤသည်အမြစ်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်မှစွမ်းအင်, hypothyroidism တစ်ဘုံလက္ခဏာဆောင်ခဲ့ရမည်။
တစ်ဦးအဖြည့်အဖြစ် maca လောင်မှ, ကျနော်တို့လမ်းညွန်နှင့်ထုတ်ကုန်သောက်သုံးသောလိုက်နာရမည်။ ကျနော်တို့ကလှုံ့ဆော်ကြောင်းအကောင့်သို့ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ရန်သင့်အားအကြံပေး အမြဲတမ်းအနိမ့်ထိုးနှင့်အတူစတင်တဖြည်းဖြည်းတိုး။
3 ။ အိုင်အိုဒင်း blockers မှအာရုံစူးစိုက်မှု
hypothyroidism ဆန့်ကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုစားဖြည့်စွက်ဖို့, သာသည်ဤအာဟာရမဆောင်ခဲ့ရကြမည်။ ငါတို့သည်လည်းအကောင့်အစားအသောက်သို့ယူရမယ် ကြောင်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အစားအစာအတွက်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ကျန်းမာသောလူများတွင်ဆိုးမဟုတ်ပေမယ့် hypothyroid နှင့်အတူလူတို့တွင်ဖြစ်နိုင်သောအစားအစာများရှိပါတယ်။ သူတို့ကစုပ်ယူတားစီးကြောင်း goitrogens ကိုခေါ်ဝတ္ထုများဆံ့တင်ချာအိုင်ဒင်း, ကောင်းသောသိုင်းရွိုက်နျြးမာရေးအတှကျမရှိမဖြစ်။
soy နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျ (Tofu, ငံပြာရည်, ဗိမာနျ, လက်ဆီသင်, etc)
cruciferous : ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း, ပန်းဂေါ်ဖီ, ဂေါ်ဖီထုပ်, မုန်လာဥနှင့်မုန်လာဉဝါ
ကဲ့သို့သောအခြောက်လှန်းအသီးအပွ ထင်းရှူးအခွံမာသီး, ပျားရည်နှင့်မြေပဲ
အချို့ကအသီးအပွ: စတော်ဘယ်ရီ, သစ်တော်သီးနှင့်မက်မွန်
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ hypothyroidism ဆန့်ကျင်သောဤကုစားနှင့်အတူကျနော်တို့ကုသမှုအားကောင်းလာစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝများတွင်တိုးတက်မှုသတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစားအသောက်အတွက်သေးငယ်တဲ့အပြောင်းအလဲနှင့်အတူကျနော်တို့သိုင်းရွိုက်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
Hyperthyroidism: ကျန်းမာနှင့်အပြည့်အဝနံနက်စာမှ5သော့ချက်
သဘာဝအရင်းမြစ်များ blueberries မှတဆင့်အိုင်အိုဒင်း၏ကောင်းတစ်ဦးစားသုံးမှုနှင့်အတူနေ့ကစတင်တူသော hyperthyroid ပြဿနာများဘာမျှတိုးတက်စေရန် Read more »